Suuqa dharka ee sanadkan ayaa u oggolaanaya shaqaale badan oo dhar-xireen ah oo warshado leh inay la kulmaan markii ugu horreysay "lo'da lacageed" sanadihii hore waxay noqotay culeys culus. Intii lagu jiray qeybtii hore ee sanadka ku dhowaad dhammaan warshadaha dharka ayaa ku jiray xaalad awooddoodu hooseyso, kharashyo badan iyo faa'iidooyin taban.
Cudurka faafa ee adduunka ayaa wali cirka isku shareeraya, tirada kiisaska cusub ee la xaqiijiyey inay sii kordhayaan maalin kasta, amarada ganacsiga shisheeye inta badan macquul ma ahan in la xisaabtamo, iyo xilliga kuleylka yar yar ee dharka loo yaqaan 'textiles' July iyo August, iyo sidoo kale cimilada kulul ka dib roobabkii tubta, waxay u muuqdaan inay cusbo ku darsadeen nabarradii xilli hoose. Sidee suuqa suuqu u fuliyaa hoos-u-dhaca naxdinta leh?
Farsamaynta ayaa dhiibtay, ha noqoto fasax ama iibin
Ka mid ah dhammaan noocyada warshadaha dharka sanadka, midka ugu adadag waa wershadda dharka wax lagu gooyo. Inta lagu jiro nuskii hore ee sanadka, xitaa haddii aysan jirin amarro, inta badan warshadaha dharka ayaa wali xajinaya furitaanka sare, ama xitaa gobolka furitaanka buuxa. Laakiin amar la’aanta dharka cawlan uma qulquleyso dhanka hoose, silsilada caasimada ee adag ee warshada ayaan u adkeysan karin in kabadan nus sano dib-u-dhac. ” Cawskii ugu dambeeyay ee jebisa dhabarka geelu 'waxay umuuqataa inay timid, dhawaanahan hoos udhaca suuqa oo dhan ayaa sii muuqda oo muuqda!
Waxa aannu haysannaa oo keliya 200 oo looms, laakiin xisaabta hadda jirta ayaa ka badan 2 milyan oo mitir. Uma eka wax badan, laakiin waa laba bilood wax soo saarkeenna. Waqti ka hor, mashiinku kuma dhicin inuu joojiyo, wuxuu ka baqayaa in shaqaalaha fasaxa ay aadaan, xitaa haddii fasaxu sidoo kale yahay dhowr warshadood oo looga wada hadlayo. Laakiin bishaan aad bay u adkeyd in la qaado, oo keliya marka hawadu kulul tahay, waxaan si toos ah isu diyaarinnaa toddobaad. Waxay kuxirantahay xaalada, sidookale way dhici kartaa ama bixi kartaa. ” Qofka mas'uulka ka ah warshad dhar-sameeye ah.
Xaqiiqdii, waxaa jira shirkado badan oo la mid ah suuqa oo doorta inay fasax yeeshaan. Marxaladi hore, shirkado badan oo dhogorta ayaa wali leh heer fur fur sarreeya iyada oo aan wax amarro ah laga helin, taasi waa, waxay isu diyaarinayaan fasax xilliyada fasaxa ka baxsan iyo cimilada kulul ee bisha Luulyo iyo Ogosto. Dabcan, maahan in dhammaan shirkadaha wax kudarsadaa ay u adkeysan karaan burburka xilliyada ka baxsan, waxay kalsooni ku qabaan suuqa xagaaga ka dib.
Waqtigan xaadirka ah, shirkado badan oo dhogor ayaa ka muuqday suuqa, iyo "tigidhada" qaaliga ah sanadihii hore ayaa laga qaatay iibka. Jawiga cimilada adag ee maanta, tilmaamayaashani waxay ku dhowdahay inay daabacaan oo waa inay noqdaan baahi, laakiin dhab ahaantii waxaa jira dad badan oo doonaya inay ka takhalusaan oo tiro yarna la wareegaan.
Marka la barbardhigo warshadaha dharka wax lagu karsado, xaalada wershadaha midabka ka dhalata xilliyada ka baxsan xilligan xaadirka ah aad uma xuma, ama xitaa in yar. Dhar caro galay tirada bakhaarka waa mid deggan, deyrta iyo amarada jiilaalka oo si isdaba joog ah loo soo saaray
In kasta oo soosaarka iyo warshadaha dharka lagu tolo wejigooda ay la mid yihiin isla suuqa sanadkan, laakiin ma muujiyaan isla gobolka. Inta badan qeybtii hore ee sanadka waa ku dhawaad ​​gobolka saadaasha furan, kaliya dhawaan ayaa si weyn hoos loogu dhigay; Laakiin warshadda lagu rinjiyeeyay ayaa sii waday inay furto suuragalnimada xasillooni, iyo xitaa soo kabasho yar mustaqbalka dhow.
Sida uu sheegayo qof mas'uulka ka ah warshaddii midabeeyaha, xaaladda warshaddii midabaynta gabi ahaanba ma xuma dhowaan. Qaadashada maalinlaha ah ee dharka cawlan ayaa ka badan 400,000 mitir, iyo awooda wax soo saarka waxaa lagu sii hayn karaa in ka badan 60%. In kasta oo la barbar dhigo qaadashada bakhaarka maalinlaha ah ee 300,000 ilaa 400,000 mitir marxaladda hore, iyo in ka badan 50% awoodda wax soo saarka, isbedelka ma ahan mid aad u weyn. Si kastaba ha noqotee, xilligii ka baxsanaa bilaha 7aad iyo 8aad xilliga daacuunka, waxqabadka noocan oo kale ah aad ayuu u fiicnaa. Waa inaad ogaataa in xilli-ciyaareedkii hore ee xagaaga, mugga kaydku wuxuu ahaa 400,000-500,000 mitir, iyo awoodda wax-soo-saarku waxay ahayd oo keliya 60% -70%.
Marka oo dhan, warshadda soo saarista ayaa si wanaagsan wax u qabtay xilligii xilliga bannaanka sannadkan. Warshado badan oo midab-dheeh ayaa muddo dheer ka buuxsamay maro, qaarna xitaa safka ayey ku sugaan. Waqtigan xaadirka ahna waxsoosaarka warshadaha lagu qallajiyo ayaa inta badan xoogaa xasuus ah, oo isku jiifa iyo alaabada kale ee dharka xilliga dayrta / jiilaalka, in kasta oo ay wali jirto fogaan yar oo ka jirta xilliga ugu sarreeya xilliga dayrta / dharka qaboobaha bilaha Sebtember iyo Oktoobar, laakiin waxaa jiray noocyo badan ayaa bilaabay inay hogaamiyaan, tijaabiyaan suuqa!
Xaqiiqdii, waa macquul inay lahaato qalloocan noocaas ah suuqa warshadaha wax soo saarka ee warshadaha iyo warshadaynta dharka lagu miro. Warshadda dharka wax lagu dhaqdo ayaa kaydin karta dharka cawlan ilaa uu macaamilku amro, oo warshadaha oo dhan wax lagu dhaqo ma saameyn doonaan iibka dharka. Kaliya la'aanta raasamaal shaqeed, waqtiga amar soo celinta ayaa ka dhigaysa dad badan oo dhar-goynta ah inay lumiyaan kalsoonida, laakiin dooro inaad joojiso luminta oo aado waqtiga.
Iyo guriga midabaynta caasimada iyo alaabada, waxay leedahay faa iido buuxda. Marka ugu horeysa, maxaa yeelay warshadeynta agabyada soo gala, warshad midabaynta ma ahan mid dib u habeyn ah, alaabada ma jirto sidoo kale ma haysato hanti maaliyadeed. Intaa waxaa sii dheer, in kasta oo amarro la'aanta ay sababtay in inta badan warshadaha midabaynta ay hoos u dhigaan qiimaha, laakiin aruurinta lacagta ayaa si hufan loo dammaanad qaadi karaa. Marka loo eego xaqiiqada ah in silsiladda raasumaalka la dammaanad qaadi karo, jiritaanka awoodda warshadaynta maqaarka ayaa ah mid dabiici ahaan aad u xoog badan. Isla mar ahaantaana, marka loo eego yaraanta warshadda dharka, oo sidoo kale loo hayaa in lagu khafiifiyo warshad ku jirta booska suuqa ayaa xoogaa xoog badan.